Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPad si iPhone
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPad si iPhone
Ogaaday in Lugood ma u sheegi kartaa in aad nuqul ka sawiro ka iPad si iPhone? Waa hagaag, waxaa laga yaabaa in aad dareento marka aad hoos u ma sugi karo inaan sawiro wareejiyo si aad iPhone qabow. Ha sasin. Halkan waa iPad si iPhone kala iibsiga awood leh - Wondershare TunesGo Retro . Iyada oo ay caawimaad, waxaad nuqul ka kartaa sawiro badbaadiyey maktabadda sawir iyo camera kitaabkii duudduubnaa iyo dadka kale ee ku iPad in aad si fudud u iPhone oo qaab aan muuqan.
Tani waxay qayb ka hooseeya diiradda ku saabsan sida loo sawiro ka iPad wareejiyo iPhone. Hadda, download this iPad si iPhone kala iibsiga on your computer. Markaas maraan tallaabooyinka soo socda ee fudud.
Tallaabada 1. Calan aad iPhone iyo iPad
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi iyo abuurtaan iPhone si kala iibsiga iPad on your computer. Iyadoo interface la mid ah sida Lugood, barnaamijkan aad u baahan yahay si loo soo dajiyo Lugood on your computer. Haddii aadan samayn, waxaad kala socon kartaa suuqa kala rakibo si loo soo dajiyo Lugood ah.
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone iyo iPad la your computer. Marka laba qalabka aad ku xiran yihiin, barnaamijkan isla iyaga lagu ogaan doonaa. Markaas, waxyaabaha aad iPhone iyo iPad ku tusi doonaa ilaa uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo Retro si buuxda u taageersan iPhone badan iyo iPads in ay maamulaan macruufka 9/8/5/6/7, sida iPhone 6s (Plus), hawada iPad iyo in ka badan. Halkan waxaa ku qoran liiska buuxa ee iPhone oo ay taageerayaan iyo iPads .
Tallaabada 2. Nuqul sawiro ka iPad si iPhone
Hadda, falgali in column ka tagay. Under buugga iPhone, guji "Sawirro" tab. Dhammaan albums aad iPhone tusi doonaa guddiga saxda ah. Haddii aad go'aansato in aad u dhoofiyaan albums, waxaad dooran kartaa albums aad doonayay ka dibna riix "Dhoofinta in". Haddii aad jeceshahay inaad dhoofin sawirada qaar ka mid ah, la furo album ah iyo dooran sawiro aad la doonayo.
Ka dib markii in, guji "Dhoofinta in". In liiska jiido-hoos loo dhigo, si ay u doortaan sawirada wareejiyo si aad iPhone. Hubi in labada mid ah iPhone iyo iPad xiran yihiin your computer inta lagu guda jiro sawirka wareejinta.
Dhab ahaantii, ee photos dhoofiyo oo albums ku badbaadi doontaa maktabadda sawir aad iPhone. Sidaas darteed, haddii aad rabto in aad iyaga u hubiyo, kaliya aad u baahan tahay inaad guji "Sawirro" hoos buugga iPhone iyo maktabadda sawir furan.
Taasi waa! Guuritaanka sawiro ka iPad in iPone waa si fudud oo effortlessly, soo maaha?
Indeed, ka sokow sawiro ka iPad gudbaayo iPhone, taas Wondershare TunesGo Retro aad u saamaxaaya in ay nuqul sawiro ka iPhone si iPhone , sawiro gurmad aad iPhone , iyo tirtirto maktabadda sawir aad iPhone .
Top 10 Apps Transfer Photo u iPhone iyo iPad
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka PC in iPad
Sidee si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka ka iPhone in Computer
Helitaanka kaabta iPhone: 4 Tallaabooyinka Access iPhone kaabta Data la Dr.Fone
Sida loo helo xogta fariin qoraal ah ka macruufka / telefoonada Android
10 Talooyin iyo tabaha ah iPhone 6 in aad dooneyso in aad ogaato About
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia Lumia Si iPhone ah
Sida loo Resize Photos on iPhone - hadhin / yareeyo Photo Size
Sida loo Email Multiple Photos ka Your iPhone
Sida loo hagaagsan iPhone si Car
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPhone in Android / macruufka / Symbian